सिण्डिकेटप्रति सरकार झनै कडाः नयाँ बसपार्कमा भएका सबै समितिका काउण्टर हटाइने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सिण्डिकेटप्रति सरकार झनै कडाः नयाँ बसपार्कमा भएका सबै समितिका काउण्टर हटाइने
शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:५३ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। सरकारले सिण्डिकेट समर्थक यातायात समिति र संघप्रति झनै कडाइ गर्न थालेको छ । यातायात व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात रोकेको दिन नै सरकारले काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट सबै यातायात समिति र संघका टिकट काउण्टर हटाउने निर्णय गरेको छ । अब यहाँ यातायात व्यवसायी कम्पनीका मात्र काउण्टर रहनेछन् ।
सरकारले बसपार्कका टिकट काउण्टर खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै विभागले पनि बसपार्कको व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.लाई काउण्टर खाली गराउन निर्देशन दिएको हो । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेपछि यति अप्रिय निर्णय लिनुपरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
काउण्टर हटाउन व्यवसायीले अटेर गर्ने आशंकासहित व्यापक प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । सहजै काउण्टर हटाउन नमाने प्रहरी बल प्रयोग गरेरै जबरजस्ती खाली गराउने सरकारको तयारी छ । यसका लागि ल्होत्सेले प्रहरी बल मागेकोमा गृह मन्त्रालयले पनि तत्कालै प्रहरी सुरक्षा उपलब्ध गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: चिकित्सकको लापरबाहीका कारण गर्भवती आमा र बच्चाको ज्यान गयो
NEXT POST Next post: काँग्रेस उपसभापतिमा निधि र महामन्त्रीमा खड्का मनोनीत
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:५३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:५३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:५३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:५३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:५३